သက်တန့်ချို: နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်းအကြောင်း (ဆရာမရွှေစင်ဦးသို့ )
သဒ္ဓါလှိုင်း October 28, 2011 at 1:07 PM
နှလုံးအကြောင်းကို သေချာရှင်းပြထားပြီး ကူညီဖို့ အဆင်သင့်ရှိတဲ့ အတွက် မမရွှေစင်ကိုယ်စား ဝမ်းသာမိတယ်။ မမရွှေစင်မှာ ခုလိုမမကိုချစ်တဲ့ မောင်နှမတွေအများကြီးရှိနေတယ်။အဆင်ပြေမှာပါနော်မမ။
မောင်ဘကြိုင်(ချဉ်ပေါင်ခြံ) October 28, 2011 at 5:49 PM
ချစ်သူ October 28, 2011 at 6:11 PM
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါအကြောင်းဖတ်သွား၊ ပြန်လည်မှတ်သွားပါတယ်။ :)
မြတ်မွန် October 29, 2011 at 11:51 AM
ခုလို သိရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒေါက်တာ..။
An Asian Tour Operator October 29, 2011 at 7:30 PM
အစ်မရွှေစင် ကိုယ်စားကျေးဇူးပါ ကိုသက်တန့်ချို။ စေတနာ ကပေါ်လွင်လွန်းပါတယ်။
Hello there there! This submit couldn’t be composed any far better! Reading through via this submit reminds me of my prior area mate! He often held discussing this. I'll ahead this informative article to him. Quite positive he'll haveavery great examine. Thanks for sharing!
မေသိမ့်သိမ့် ကျော် October 30, 2011 at 11:06 PM
ဆရာရေ ဗဟုသုတတွေ မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။ မမရွှေစင် အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေရှင်။
ကျေးဇူးတင်ကြောင်းအခုမှ လာပြောဖြစ်ပါတယ် ကျေးကျေးပါနော် မင်္ဂလာဒုံ ဆေးရုံကြီး မှာ ကုဖို့ ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ် ဆေးရုံ စာရင်းသွင်း ဖို့ မနက်ဖြန် ၉နာရီကားနဲ့ လာပါမယ် လေးရက်နေ့ ရန်ကုန်ရောက်မယ် ကျနော့် ဖုန်းနံပါတ်က 09-2013072
ကိုသက်တန့် ဖုန်းနံပါတ်လည်း လိုချင်ပါတယ်
သက်တန့်ချို November 4, 2011 at 9:38 AM
အစ်မရွှေစင်ရေ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျ ဖိုက်တင်း !!!!